Jwxo-shiil, oo Dirqi Kaga Baxsaday Gacanqaad ka Yimid Xubno ONLF ah, oo ku Sugan South Afrika – Rasaasa News
Mar 25, 2010 dilaal, Jwxo-shiil, ONLF, south afrika
Wararka ka imanaya Magaalada Johansberg ee dalka South Afrika ayaa sheegaya u in Dambiile Jwxo-shiil, uu dirqi kaga baxsaday gacanqaad ka yimid xubno ka tirsan ururka ONLF, oo xiligan ka xoogsada dalka South Afrika.
Sida ay wararku sheegayaan Jwxo-shiil, ayaa Johansberg u tagay arimo caafimaad iyo arin kale oo la xidhiidha wadahadalkii ay Itobiya la wadeen rag beeshiisa ah una shaqeeya xawaalada Kaah.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in Jwxo-shiil, lagu dhex arkay hool lagu daawanayey muuqaalo laga soo duubay dadka qaxootiga ah ee degan xerada dhadhaab Kenya, kana soo cararay dhulka Somalida Ogadeeniya.
Dhalinyar ka tirsan ururka ONLF, oo ku sugnay hoolka ayaa aqoonsaday bidhaanta Jwxo-shiil, waxayna arkeen in dad hubaysan oo beeshiisa ahi ay ilaalinayaan, kolkii lagu kala dareeray hoolka, ayey iska dhigeen dad la socday oo salaamaya waxaana mid ka mid ahi uu la laacay Jwxo-shiil gacan qaad fog.
Isla markiibana waxaa ka dhex maray oo wiilkiina kala tuuray ragii Jwxo-shiil waardiyeynayey oo isla markiiba gaadhina kula cararay, kuwaas oo geeyey meel aan la ogayn.
Lama oga sababta keentay Hoolka iyo ujeedada uu lahaa Jwxo-shiil, waxayse arintu u ekayd beeqaaq iyo bal in uu ka helo hoolka dad ay macariif yihiin oo bulshada u dhex gala si loo helo kharajka dawada ee Isbitaalka.
Waxaa kale oo uu halkaas ku arki doona xubno ka imanay Dubai, ka dibna la kulmi doona safaarada Itobiya ee south Afrika.
South Afrika ayaa waxaa ku badan dhalinyaro ka tirsan ururka ONLF, oo ay Jwxo-shiil iyo beeshiisu hore dhibaato ugu gaysteen. Waxaa kale oo iyana aad u jooga halkaas dhalinyaro badan oo uu Jwxo-shiil si xun u dilay ehelkooda, waxaana dadkaas ka muuqda cadho aad u badan.
South Afrika ayaa ah dal hubka la iska wato oo ruuxa la damco si fudud loo dili karo iyada oo la adeegsanayo dadka dalka u dhashay. Qiimaha ugu badan ee dadka lagu khaarajiyo ayaa ah ugu badnaan ZAR3500 oo u dhiganta US$500.
Waxaa suurto gal oo ay qoyskiisu wadnaha farta kaga hayaan in xadhig buu kaga cabsaday imaanshaha Ingriiska ee in ay arintu noqoto fule intuu cararayo ayuu col u galaa.
Boggaga Jwxo-shiil, ayaan iyagu waxa kala soconin xaalka Jwxo-shiil, waxa uu qalbigood jecel yahayna iska qora iyaga oo dadweynaha been ku asqaysiiya.
Wixii war ka soo kordha wararka ku saabsan caafimaadkiisa iyo dadka cadhaysan oo sida la sheegay aan iyagu nasiib mooyee gacan la gafayn Jwxo-shiil, gadaal ayaan idiinka soo tabindoonaa.